STUDY ABROAD Information Centre - STUDY ABROAD Information Centre
STUDY ABROAD provides complete services for students such as
Choosing the right courses, (ရွေးချယ်သင့်သည့် ဘာသာရပ်များအား ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း။)
Improving English proficiency, (အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံပိုမို တိုးတက်လာအောင် အခမဲ့ လမ်းညွှန်ပေးခြင်း။)
Applying to institutions, (ကျောင်းများလျှောက်ထားရန် ကူညီပေးခြင်း။)
Applying for Student Pass, (ကျောင်းသား visa များလျှောက်ထားရန် ကူညီပေးခြင်း။)
Applying for Entry Visa to Singapore, (ပြည်ဝင်ခွင့် visa လျှောက်ထားရန် ကူညီပေးခြင်း။)
Arranging accommodation and airport pickup, (သွားရောက်မည့် နိုင်ငံရှိလေဆိပ်တွင် တွေ့ဆုံကြိုဆိုရေးနှင့် အဆောင်ကိစ္စအ၀၀ကို အခမဲ့ကြိုတင် စီစဉ်ပေးခြင်း။)
Giving departure briefing, arranging group travelling. (ပြည်ပ မထွက်ခွာမီ ပြင်ဆင်မှုများ၊ လမ်းခရီးအစီအစဉ်များ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ အစရှိသော သိရှိသင့်သည့် အချက်အလက်များအားအသေးစိတ် ရှင်းပြပေးခြင်း။
Post-arrival services & Advice, (ပညာဆည်းပူးစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဆက်လက် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အခက်အခဲ များရှိပါက လိုအပ်သလိုကူညီအကြံပေးခြင်း။)
Annual gathering party! (ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နှစ်ပတ်လည် စုစည်းတွေ့ဆုံပွဲများ စီစဉ်ပေးခြင်း။)
To date, all our students have obtained Student Pass / Visa without any difficulty.
(၂၀၁၅) နှစ်သစ်မင်္ဂလာတွင် စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
Study Abroad Education Days များသို့ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကို International Education Guide 2015 ကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
James Cook University Singapore ၏ မတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ကျောင်းလျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ။
SIM တွင် မြန်မာငွေ (၈၉)သိန်း ကုန်ကျရုံဖြင့် စီးပွားရေး Diploma ဘွဲ့ကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
ဘွဲ့လွန် MBA တက်ရောက်လိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ မတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အမှီ STUDY ABROAD Information Centre မှ Course Fees Discount လျှောက်ထားနိုင်မည်။
" I chose STUDY ABROAD because it is one of the well-known Informationn Center and provides quality services.
May Thin Khine
STUDY ABROAD Information Centre ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ စင်္ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy မှ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင် Dr. Lucas S. Karatzas မှ ယနေ့ ကမ္ဘာတွင်တွေ့ကြုံနေရသော “21st Century Innovations – Engineering Challenge” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၇) ရက်နေ့တွင် နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီမှ (၁၁း၃၀) နာရီအထိ မန္တလေးမြို့ ၊ စွမ်းဟိုတယ် ၊ ရတနာ ခန်းမ နှင့် မတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီမှ (၁၁း၃၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ၊ Parkroyal ဟိုတယ် ၊ ပတ္တမြားခန်းမ တွင် ဆွေးနွေး ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
စင်္ကာပူအခြေစိုက် Nanyang Institute of Management မှ SIET အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ အတွက် ပေးအပ်သော Tuition Grant များ အကြောင်း ကို STUDY ABROAD Information Centre ရုံးတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၃) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီအထိ Nyanyang ကျောင်းမှ တာဝန်ခံမှ တစ်ဦးချင်း လူတွေဆွေးနွေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ။
၂၀၁၅ မတ်လနှင့် ဧပြီလ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမှီ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ PSB Academy တွင် တက်ရောက်လိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ STUDY ABROAD Information Centre မှ တဆင့် ကျောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သင့်စိတ်ကူး အိမ်မက်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ Raffles College မှာ တက်ကြပါစို့။
About Study Abroad Information Centre (SAIC)
STUDY ABROAD Information Centre is under REGENT EDUCATION’S GROUP. STUDY ABROAD Information Centre (STUDY ABROAD) isasister company of Regent Consultancy Services, which has been operating for 11 years and is Educational Consulting Company. STUDY ABROAD is founded in June 2009 and has helped many Myanmar students to continue their education at world-wide institutions with the view to promote higher education in the field of various Major including Designs, Management and Technology education. To provide quality education at affordable prices is the reason behind the establishment of STUDY ABROAD. STUDY ABROAD guides students for Education to achieve quality education with better career prospectus. Studying at an affordable price isadream for many who may not be able to purse.
Seminar and News